इथियोपियाको जहाज दुर्घटनाबाट जाेगिएका भाग्यमानी ग्रिसेली नागरिक ! — Paschimnews.com News From Nepal
इथियोपियाको जहाज दुर्घटनाबाट जाेगिएका भाग्यमानी ग्रिसेली नागरिक !
आइतबार इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबाबाट नैरोबीका लागि उडेको इथियोपियन एयरलाइन्सको जहाज केही बेरमै दुर्घटना भयो । जहाजमा १ सय ४९ यात्रुसहित चालक दलका आठ जना सदस्य थिए ।
दुर्घटनामा परेर सबैको घटनास्थलमै ज्यान गयो । तर ग्रीसका एक जना यात्री धेरै भाग्यमानी थिए जो यो दुर्घटनाबाट बाँच्न सफल भए । एन्टोनिस मावरोपालोस यस विमानका १ सय ५० औं यात्री थिए । एयरपोर्टमा दुई मिनेट ढिलो भएका कारण उनले त्यतिबेला त आफैलाई सरापेका थिए तर पछि भने आफू भाग्यमानी भएको भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे ।
मावरोपोलोसले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेरो भाग्यमानी दिन’ भन्दै एक स्टाटस लेखेका छन्, ‘त्यो दिन म एकदमै तनावमा थिएँ, किनकी समयमै गेटमा पुग्नको लागि कसैले पनि मलाई सहयोग गरेका थिएनन्, र मेराे फ्लाइट छुट्न गयाे ।’
उनले फेसबुकमा आफ्नो टिकटको फोटो खिचेर पनि शेयर गरेका छन् । एथेन्स समाचार एजेन्सीका अनुसार मावरोपोलोस एक गैर नाफामूलक संगठनमा अन्तर्राष्ट्रिय सोलिड वेस्ट एसोसिएशनका अध्यक्ष हुन् ।
उनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमको वार्षिक सभामा भाग लिन नैरोबी जान लागेका थिए । तर उनी प्रस्थान गेट बन्द भएको कारण दुई मिनेट पछि मात्र त्यहाँ पुगे र विमानमा जान पाएनन् । उनले पछिको उडानको लागि पनि अर्को टिकट बुक गरे तर त्यहाँका कर्मचारीले उनलाई यात्रामा राेक लगाए ।
यी ग्रिसेली नागरिकले विमान दुर्घटनाकाे खबर सुनेपछि आफू भावूक भएको बताएका छन् ।